आयुष्मानको यो कस्तो शैली ? प्रियंकाको फोटो पोजको कपी गर्दा ट्रोलको सिकार बन्दै (फोटो सहित) | आयुष्मानको यो कस्तो शैली ? प्रियंकाको फोटो पोजको कपी गर्दा ट्रोलको सिकार बन्दै (फोटो सहित) – हिपमत
अभिनेता आयुष्मान देशराज जोशीले अभिनेत्री प्रियंका कार्कीलाई च्यालेन्ज दिँदै आफुले पनि ब्याचलर पार्टी मनाएका छन् । यही फागुन १५ गते अभिनेता आयुष्मान र अभिनेत्री प्रियंका विवाह बन्धनमा बाँधिदै छन् । विवाह मिति नजिकिएसँगै दुवै जनाले ब्याचलर पार्टी मनाएका हुन् ।